Fur kaarka SD-ga yar ee qoraalka lagu ilaaliyo | Dayactirka Bios
1 Sida loo furo kaadhka Micro SD ee Windows ka ilaalinaya
1.1 Iyada oo loo sii marayo Quful / Furi beddelka
1.2 Iyadoo loo marayo Diiwaanka Windows
1.3 Isticmaalka qalabka Diskpart
1.4 Adeegsiga Faylka Faylka
1.5 Isticmaalka HDD LLF Qalabka Qaabka Heerka Hoose
2 Habka lagu furayo kaarka SD-ga ee qorista ee Mac OS
2.1 Codsiga Utility Disk
3 Beddelka furitaanka kaadhka SD-ka ee laga ilaaliyo qorista ee taleefannada casriga ah iyo tablet-yada
3.1 IOS / iPadOS aaladaha
3.2 Aaladaha Android
Dad badan ayaa maanta dhib kala kulma nuqul ka samaynta iyo u rarid galka faylasha kaararka SD micro. Tani waxay sabab u tahay ilaalinta qorista ee qalabkan elegtarooniga ah ay soo bandhigaan. Waa in la ogaadaa in ilaalinta qoristani ay tahay aalad ammaan oo adeegsata kaadhka noocaan ah, mid jir ahaan ama muuqaal ahaan, si looga hortago in macluumaad cusub lagu daro ama wax laga beddelo kaadhka la sheegay.
Sidaa darteed, hoos, waxaan ku sharixi doonaa doorarka kala duwan ee Sida loo furo kaarka micro SD Ku qor-ilaallan Windows iyo Mac OS labadaba si aad u kaydiso oo aad ugu raaxaysato macluumaadkaaga mar kasta iyo meel kasta oo aad u baahan tahay.
Sida loo furo kaadhka Micro SD ee Windows ka ilaalinaya
Shaki la'aan, fursadaha aan haysano furo kaarka SD micro ah qor-ilaallan iyadoo la isticmaalayo nidaamka hawlgalka Windows. Marka xigta, waxaan sheegi doonaa oo sharxi doonaa kuwa aadka loo isticmaalo. Kuwani waa:
Iyada oo loo sii marayo Quful / Furi beddelka
Inta badan, furida kaadhka SD-ga ee qorista-ilaashan ayaa ku filan in meesha laga saaro habka qufulka jirka kaarka xusuusta.
Waxaa xusid mudan inta badan kaararka xusuusta microSD waxa ay dhinaca bidix ku leeyihiin wax yar oo shidiye ah oo ay ku suntan tahay quful kelmadda. Tani waxay ka dhigan tahay haddii ay ku xiran tahay jihada saxda ah, waxay kuu ogolaaneysaa inaad awood u yeelato ilaalinta qorista ee kaadhka.
Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda ah in beddelka su'aasha la dhigo dhinaca qalabka waxay inta badan gacan ka geysan kartaa xannibaadda qorista xogta si lama filaan ah. Si loo xalliyo, sidaas darteed, waa ku filan in si fudud loo dhaqaajiyo wareejin jihada ka soo horjeeda.
Iyadoo loo marayo Diiwaanka Windows
Haddii kaadhka xusuusta uusan lahayn wax furayaasha ah oo aadan weli si fiican u isticmaali karin, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho Diiwaanka Windows. Kaas oo meeshaas ka joojin doona ilaalinta qorista. Marka xigta, waxaan sheegi doonaa sida loo sameeyo. Kadib:
Marka hore, marka hore, ku xidh kaadhka micro SD kombiyuutarka. Waxaad samayn doontaa tan adigoo gelinaya akhristaha ku habboon.
Hadda sii wad si aad u soo kabsato diiwaanka adigoo riixaya isku darka furaha Windows + R ee kumbuyuutarka PC, si aad u furto "Orod".
Marka dambe daaqadda aad aragto oo ka soo muuqda desktop-ka, ku qor amarka"regedit".
Kadibna ku dhufo badhanka"aqbalaan"Oo gal diiwaanka.
Daaqadda cusub ee lagu tusi doono, isticmaal faylalka ku yaal dhinaca bidixda si aad u aado jidka HKEY_LOCAL_MACHINE> SYSTEM> CurrentControlSet> Control> StorageDevicePolicies.
Hadda laba jeer dhagsii furaha WriteProtect oo ku qor 0 goobta "Qiimaha xogta" oo guji "OK" badhanka.
Haddii aadan heli karin faylka "KaydintaDevicePolicies", Waxaad ku abuuri kartaa adigoo midigta gujinaya" Control "folder ka dooranaya liiska furmo, shayada" New> Password ".
Hadda waa inaad abuurtaa furaha "Qor Sheeg”. Ka dib, midig-guji galka"KaydintaDevicePolicies"Oo dooro ikhtiyaarada liiska soo muuqda"Cusub> Qiimaha DWORD (32 bit)".
Ugu dambeyntii, dib u bilow kombayutarka oo isku day mar kale inaad xogta ku qorto kaarka SD-ga micro.
Isticmaalka qalabka Diskpart
Beddel kale oo hufan oo lagu furi karo kaarka SD-ga ee qorista ee Windows waa aaladda "Diskpart". Tani waxay u dhigantaa qalab qaybsan oo faa'iido leh oo lagu dhisay Windows, kaas oo laga isticmaali karo khadka taliska. Marka xigta, waxaan xusi doonaa tillaabooyinka la raacayo si aan u furno kaarka SD-ga ee qorista-ilaallan ee isticmaalaya qalabkan. Kadib:
Marka hore, geli kaarka SD-ga micro SD-ka akhristaha kombiyuutarka.
Kadibna ku dhufo badhanka Start (kan leh astaanta Windows) oo ku yaal dhinaca bidix ee fog ee goobta shaqada.
Hadda fur"Amarka degdegga“Anigoo leh dhawrsanaan maamul. Sidaa darteed, waa inaad qortaa "cmd"Meelka raadinta. Si taas loo sameeyo, waa in aad midig-guji natiijada u dhiganta oo aad ka doorataa shayga "Run as administration" ka menu ee furmay. Kadib markaad si sax ah ufuliso talaabooyinkii hore, dhagsii badhanka "Haa".
Hadda daaqadda "Amarka degdegga"Kombiyuutarka, ku qor amarrada soo socda adigoo riixaya" furaha.Intro"Keendhka PC-ga. Kadib:
Diskpart: Si aad u bilowdo utility Diskpart.
Liiska saxanka: Si aad u taxdo darawallada laga heli karo kombiyuutarka oo aad heshid kaarka SD micro kaas oo dhammaan rukhsadaha lagu soo celin doono.
Dooro disk x: Si aad u dooratid darawalka la xiriira kaarka SD-ga ee aad rabto inaad ku shaqeyso. Xusuusnow in halkii "X", waa inaad qortaa lambarka la xidhiidha kaarka SD-ga.
Sifada saxanka waa cad yahay akhrin keliya: Si aad u tirtirto sifooyinka akhri-kaliya ee kaadhka xusuusta.
Salida: Si aad uga baxdo Diskpart.
Ugu dambeyntii, kaarkaaga micro SD wuxuu u baahan doonaa in la furo, sidaas darteed waxaad si xor ah ugu isticmaali kartaa akhriska iyo qorista.
Adeegsiga Faylka Faylka
Xaaladdan oo kale, si loo isticmaalo kaarka micro SD dhibaato la'aan, waxaa lagama maarmaan ah in la qaabeeyo. Hawlgalkan waa mid ku habboon Windows iyo Mac OS labadaba. Si kastaba ha ahaatee, ilaa aad u abuuray gurmad ahaan sida qiyaas ka hortag ah, si lama huraan ah waxaad la kulmi doontaa khasaaraha xogta on drive. Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa sida loo furo kaarka SD-gaaga adigoo u qaabeynaya adigoo isticmaalaya Faylka Xawilaadda. Kadib:
Marka hore fur faylka sahaminta adiga oo gujinaya "Galka jaalaha ah”. Kaas oo ku jiri doona Taskbar-ka
Hadda ku xidh kaadhka micro SD-ka ee kaarka kombuyuutarkaaga.
Kadib, daaqada ka soo muuqatay desktop-ka, dooro shayga "PC-gaan"Ama" Kooxdan" oo ka yimid dhinaca bidix.
Ka dib, midigta ku dhufo shayga "Astaanta kaarka Micro SD" si aad u qaabayso, ka menu-ka soo muuqda, ka dooro shayga "Foomka".
Kadib markaad dhamaystirto talaabadii hore, u gudub daaqada dheeriga ah ee furmay, dooro "FAT32"Ama" exFAT" ka menu-hoos u dhaca si aad u doorato nidaamka faylka.
Ugu dambeyntii, ku qor magaca aad rabto inaad ku dhejiso aaladda gudaha "calaamadaha codka" oo guji badhamada "Bilow"iyo"aqbalaan"Si aad u bilowdo nidaamka.
Isticmaalka HDD LLF Qalabka Qaabka Heerka Hoose
Si aad u furto kaadhkaaga SD-ga ee qorista ee Windows, waxa aad qaabayn kartaa kaarkaga SD-ga micro addoo isticmaalaya HDD LLF Qalabka Qaabka Hoose.
Kani waa software bilaash ah dhammaan nidaamyada hawlgalka Microsoft. Intaa waxaa dheer, waa in la ogaadaa in ay u oggolaanayso oo kaliya in ay farageliso kaararka micro SD, xusuusta USB iyo darawallada adag marka la fulinayo qaabka hoose ee cutubka. Taasi waa, waxay tirtiri doontaa dhammaan xusuusta si dhammaystiran iyo wadarta guud. Marka xigta, waxaan xusi doonaa dhammaan nidaamka la qabanayo si loo dammaanad qaado furitaanka kaarka SD-ga ee qorista ee xafidan. Kadib:
Marka hore sii wad si aad u soo dejiso si aad sidaas u sameyso, ku xir shabakadeeda oo guji xiriirka "Download Windows Executable: HDD Low Level Format Tool ver.xx". Kaas oo joogi doona qaybta hoose ee bogga iyo sida xog gaar ah waxay u shaqeysaa iyada oo aan la rakibin.
Kadib marka soo dejintu dhammaato, fur “.exe file".
Hadda, daaqadda ka soo muuqata desktop-ka, dhagsii badhanka "Haa, waan ogolahay" ka dibna ku sii wad "free".
Dooro kaadhka micro SD si aad uga qaabayso liiska oo guji badhankaSii wad".
Ugu dambeyntii, tag tab "Low level format" oo guji badhanka "Qaabkan aaladda”Si aad u bilowdo habaynta saxanka.
Habka lagu furayo kaarka SD-ga ee qorista ee Mac OS
Haddii, dhanka kale, aad isticmaalayso a Mac OS kombiyuutarka, waxaad samayn kartaa qaab hoose ee kaadhka xusuusta. Habkani wuxuu la mid yahay kii lagu arkay tallaabadii hore ee nooca Windows, iyadoo la isticmaalayo Disk Utility. Xusuusnow in codsiga hore loogu daray dhammaan kombiyuutarada Mac ee maaraynta qaybinta. Kadib:
Codsiga Utility Disk
Si aad u isticmaasho, ku billow adigoo gujinaya sumadda (midka wata dariiq adag) ee ku jira galka "dheeraad ah"Lunchpad ka.
Kadib, daaqadda aad hadda ku aragto shaashadda, dooro magaca kaarka SD-ga ee qoraalka-ilaallan.
Hadda waxaad riixi kartaa badhanka soo celinta / qaabka, kaas oo ku yaal meesha ugu sareysa.
Kadib, daaqada dheeriga ah ee furmi doonta, dhagsii badhanka loo aqoonsaday inuu yahay "Xulashada amniga".
Ku sii wad si aad u dejiso bar hagaajinta Utility Disk booska saddexaad ama afaraad. Sidan waxaad awoodi doontaa inaad sameyso saddex ama afar dib u qor xogta ku jirta kaarka.
Marka tallaabadii hore la dhammeeyo, taabo badhanka "Aqbal".
Ugu dambeyntii, dooro magaca lagu qorayo kaadhka xusuusta iyo nidaamka faylka. Tan waxaad isticmaali kartaa menu-yada u dhigma"magaca"iyo"Foomka".
Hadda ku bilow habka qaabaynta adigoo gujinaya "Soo Celinta" badhanka.
Beddelka furitaanka kaadhka SD-ka ee laga ilaaliyo qorista ee taleefannada casriga ah iyo tablet-yada
Marka xigta, waxaan xusi doonaa fursadaha kala duwan ee jira si looga furo kaarka SD ee laga ilaaliyo qorista ee casriga ah iyo Tablets. Kadib:
IOS / iPadOS aaladaha
Nidaamka hawlgalka ee qalabkan elegtarooniga ah ma ogola in la furo kaararka SD micro iyadoo si toos ah loo qaabeeyey sida nidaamka nidaamyada kale ee hawlgalka. Xaaladahan waa inaad ka soo dejisan kartaa codsiyada aan rasmiga ahayn shabakada si aad awood ugu yeelatid inaad furto. Si kastaba ha ahaatee, laguma talinayo in sidaas la sameeyo sababtoo ah hababka noocan oo kale ah waxay dhaawici karaan qalabka elektaroonigga ah.
Haddii aad leedahay talefanka casriga ah ee Android ama tablet-ka, waxa aad furi kartaa kaarka SD-ga ee qorista-ilaalan ee qoraalka ah adiga oo si toos ah uga habaynaya liiska nidaamka hawlgalka. Iyadoo la sheegay in, si ay u qaabeeyaan kaarka micro SD ee Android, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo tallaabooyinka hoose. Kadib:
Marka hore waxaad u baahan doontaa inaad geliso kaarka SD-ka ee booska ku habboon. Badanaa waxaa laga helaa dhinaca ama dhinaca kor aaladda.
Markaas waa in aad qaadatid qalabka, fur oo aad gasho guriga. Xasuusnoow in gurigu yahay shaashada ay ku yaalaan calaamadaha codsiyada oo dhan.
Hadda dooro icon "Settings" (mid leh calaamadda qalabka).
Ka dib, shaashadda karti u leh, dooro shayga loo aqoonsaday "Xusuusta iyo faylka".
Ugu dambeyntii dooro shayga "Format" ka dibna badhanka "Delete and format". Halkaa marka ay marayso, waxaad shaashadda ku arki doontaa ogeysiis kuu sheegaya dhamaystirka habraaca.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad geliso kaarka micro SD ee casrigaaga ama tablet-kaaga, waad qaabayn kartaa oo aad dooran kartaa inaad u dejiso sidii kayd xusuusta hoose ama sare ah. Si tan loo sameeyo, waa inaad si fudud u taabataa ogeysiiska u dhigma si caadi ah oo ka muuqda shaashadda.
Gabagabadii, waxaan rajaynaynaa in dhammaan macluumaadkan la xidhiidha beddelka kala duwan ee Sida loo furo kaarka micro SD qor-ilaallan, aad bay kuu caawinaysaa. Sidoo kale, haddii aad jeceshay maqaalkan, waxaan kugula talineynaa inaad gasho isku xirka xiga halkaas oo aad ka heli doonto macluumaad kala duwan oo xiiso kuu leh.
Previous: post Previous: Si fudud u soo deji Skype bilaash
Next: post Next: Sida loo habeeyo TP-LINK Extender